BLACK NADIA: Mpanakanto vehivavy Malagasy, mpanjakan’ny mozika | Madatopinfo
BLACK NADIA: Mpanakanto vehivavy Malagasy, mpanjakan’ny mozika
Noporofoin’ny tarika Black Nadia ny Sabotsy 2 Febroary lasa teny amin’ny Lapan’ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahantena Mahamasina teo nandritra ny lanonana fanolorana “trompée RDJ Mozika 2018″ fa manana ny mahaizy azy ny tarika raha eo amin’ny sehatry ny mozika. Nahazo ny mari-pankasitrahana “Mozika milamina féminin” tamin’ilay hira “Mizara karatse” i Black Nadia. Artista anisan’ny nanamarika ny RDJ Mozika 2018 ity mpihira fanta-daza ity niaraka tamin’ireo ekipany, niavaka tamin’ny rehetra ny fomba fitafin’izy ireo na ny taovolo na ny firavaka.
Raha tsiahivina, miisa 4 izay ny “trophée” azon’ny tarika Black Nadia hatramin’ny nisian’ny RDJ Mozika: fampiaraham-peo niaraka tamin’i Lola (Duo de l’année), mozika mafana féminin, artiste de l’année ary ny mozika milamina féminin.
Vokatra vaovao be
Tsy mitsahatra manome fahafaha-po ho an’ny mpakafy azy i Black Nadia, raha ny volana Desambra lasa teo no nivoaka ny hira “Kakatity” izay efa tsy miala am-bavan’ny maro, nivoaka tamin’ny fomba ofisialy omaly Talata 5 Febroary ihany koa ny sangan’asa vaovao be mitondra ny lohateny “K.o, k.o”. Raitra ity rakitsary vao nivoaka ity, izay notontosaina teto Madagasikara. Mivoatra hatrany ny vokatra atolotry ny tarika Black Nadia ho an’ny mpankafy ary efa hain’ny olona sahady ity hira vaovao ity. Mbola mitohy hatrany izany fanomezana fahafaha-po bo an’ny mpakafy izany na ny eto an-toerana na ny any ivelany. Hihazo ny Nosy La Réunion sy Frantsa tsy ho ela ny tarika. Ankoatra izay, ny volana Martsa ho avy izao hikarakara rakitsary any Cape Town ity mpanjakan’ny mozika Malagasy ity.